Asomafo 17 NA-TWI - Paulo ne Silas kɔ Tesalonika - Wɔtoaa - Bible Gateway
Asomafo 16Asomafo 18
Asomafo 17 Nkwa Asem (NA-TWI)
17 Wɔtoaa wɔn akwantu no so fii Ampifoli ne Apolonia baa Tesalonika a na Yudafo hyiadan wɔ no. 2 Sɛnea Paulo taa yɛ no, ɔkɔɔ hyiadan mu mprɛnsa ne nnipa no gyee akyinnye wɔ Kyerɛwsɛm no ho, 3 kyerɛɛ mu, dii adanse sɛ ɛsɛ sɛ Agyenkwa no hu amane na ɔsɔre fi awufo mu. Paulo kae se, “Saa Yesu a mereka ne ho asɛm akyerɛ mo yi ne Agyenkwa no.” 4 Nnipa no bi gye dii ma wodii Paulo ne Silas akyi. Saa ara nso na Helafo bebree a wɔsom Onyankopɔn ne mmea mpanyin bi nso gye dii de wɔn ho bɔɔ wɔn ara nen.